Igbo, John: Lesson 037 - Kraịst na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ ma na-ekpe ụwa ikpe (Jọn 5:20-30) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 037 (Christ raises the dead and judges the world)
3. Kraịst na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ ma na-ekpe ụwa ikpe (Jọn 5:20-30)
25 N'ezie, n'ezie, asim unu, Oge hour nābia, ub͕u a kwa, mb͕e ndi nwuru anwu gānu olu Ọkpara Chineke; ndi nuru gādi kwa ndu. N'ihi na dika Nnam nwere ndu nime onwe-ya, otú a ka O nye-kwa-ra Ọkpara-Ya inwe ndu nime onwe-ya.
Jizos mere ka o doo anya na obu eziokwu ahu, n'ikwu, "N'ezie, n'ezie asim unu". Ọ na-emezu amụma ndị metụtara nbịbịbịa ya karịa ndị echere Agba Ochie. Ọ kpọlitere ndị nwụrụ anwụ n'ọnwụ. Mmadu nile anwuwo n'ime nmehie na ihe ojoo, ma Jisos bu Onye Nsọ, Okpara nke Chineke incarnate, onye n'anu aru ya meriri nmehie ime ka ayi keta ndu ya site n'okwukwe. Onye na-ege ntị taa maka Oziọma nke nzọpụta ma ghọta ya na ịrapara n'ahụ Jizọs na-enweta ndụ Chineke. Kemgbe Ụbọchị Mbilite n'Ọnwụ anyị maara na okwukwe anyị bụ okwukwe nke ndụ, ọ bụghị okpukpe nke ọnwụ na mbibi. Jizọs na-etinye mmụọ nke ndụ ya n'ime ndị na-ege ya ntị, na ndị na-aghọtaghị ịhịa aka n'ahụ ya, ma ogologo oge iji ghọta okwu ya. N'ime ha, ọ na-eme ka ezi nụ na n'ụzọ dị otú a, okwu ya dị ịtụnanya na-aghọ eziokwu, na ndị nwụrụ anwụ na mmehie ha nụ. Ndị nwụrụ anwụ apụghị ibili ọtọ ma ọ bụ gee ntị n'onwe ha kama Jizọs na-ewetara ha ndụ ma na-ege ntị.
Ndụ anyị nke ụwa na-ala n'iyi, mana ndụ nke Chineke nyere anyị na-adịru mgbe ebighị ebi. Dika Jizos si kwuo ya "Mu onwem bu nbilite n'onwu na ndu: onye kwere na mu obu ezie na o nwuru anwu, o ghadi ndu: onye obula nke no ndu ma kwere na mu, agagh anwu."
Kraist nwere ike ime ka anyi di ndu ebe Nna m nyere ya ndu ebighi ebi. Kraist di ka mmiri nke buru ibu nke sitere na mmiri nke ndu n'emechighi. Site n'aka Ya ka ayi nata ìhè n'ìhè, Ihunanya nime ihu-n'anya, Eziokwu n'eziokwu. Site na ya enweghị ire ure ma ọ bụ ọchịchịrị mere, ma ọ bụ echiche ọjọọ. O Juptara n'ihi n'anya, dika po lkwuru: Kraist nwere obioma, enyi adighi enwe anya] ma maob inya isi; ọ dịghị achọ ihe maka onwe ya ma ọ bụ na-eche ihe ọjọọ banyere ndị ọzọ ma ọ bụ na-aṅụrị ọṅụ n'ihi ikpe ọmụma. Ọ na-atachi obi n'ihe nile, ma nwee ndidi n'ebe mmadụ nile nọ; ịhụnanya ya adịghị ada ada. Nke a ka O nyere anyị site na Mmụọ Ya. Ka anyi buru isi iyi nke ndu.
27 O nyekwara ya ikike ime ihe e kpere n'ikpe, n'ihi na ọ bụ nwa nke mmadụ. 28 Ka ihe a ghara iju gi anya: n'ihi na oge hour nābia, nke ndi nile nọ n'ílì gānu olu-ya, 29 ha gāputa kwa; ndi mere ezi ihe, na nbilite n'onwu nke ndu; na ndi meworo ihe ọjọ, rue nbilite-n'ọnwu nke ikpé.
Mmadụ efu anwụọla n'ihi nmehie. Onye ọ bụla nke na-adịghị eme ọsọ ọsọ gaa n'ịhụnanya Chineke na-ekpe onwe ya ikpe. Okwu Kraịst bụ ịhụnanya, dị ike na ịdị ọcha. Onye na-ege ya ntị ma nabata ya dị ndụ. N'otu oge ahụ okwu ya na omume ya bụ ụkpụrụ nke ndụ anyị. Chineke na-ekpe ya ikpe; ọ bụ Onye Nsọ, nwaa anyị ọnwụnwa ma ọ bụrụ na anyị enweghị mmehie. Ọ dịghị onye ọ bụla ga-ebu ụzọ kwuo n'ihu ụlọikpe Chineke. Kraist ka bu nani Onye kwesiri iweghara ikpé nile nke uwa niile ma o ga-ekpebi ihe mgbaputa nke mmadu niile. Ndị mmụọ ozi na ihe nile e kere eke ga-efe ya ofufe.
Mbilite n'ọnwụ ga-ewere ọnọdụ site n'iwu Jizọs. Oku ya ga-akpu ụwa anyị, ndị nwụrụ anwụ anaghị anụ oku nkịtị, ma olu Ọkpara ga-eme ka ndị nwụrụ anwụ maa jijiji. A ga-akpọlite mkpụrụ obi ndị na-ehi ụra wee hapụ ili ha. Icheta ihe ebube, ụfọdụ mkpụrụ obi ga-ebili ka ha dị ndụ mgbe ndị ọzọ dị ka ndị nwụrụ anwụ. E nwere mbilite n'ọnwụ abụọ, otu maka ndụ, nke ọzọ maka ikpe. Oge ahụ ga-eweta ihe ịtụnanya dị ịtụnanya, ụfọdụ ga-ekpuchi n'ọchịchịrị, ebe anyị chere na ha bụ ọkụ ọkụ. Ndị ọzọ ga-enwu gbaa dị ka anyanwụ, mana anyị chere na ha dị mfe na enweghị ihe ọ bụla!
Ndị ezi mmadụ ndị dị ndụ n'ihu Chineke adịghị mma karịa ihe ọjọọ. Ma Kraist nke Jisos gbaghaara ìgwè nke mbu ma jiri obi ekele zaa ya. Ha biri ike nke Oziọma ya. Ndụ ha gosipụtara mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ na-arụpụta. Jizọs ejiriwo ọbara ya dị oké ọnụ ahịa kpochapụ ihe ọjọọ ha niile. Nme amara a abiala ha site na okwukwe.
Otú ọ dị, onye na-eche na ọrụ aka ya zuru ezu tupu Chineke nụ okwu a, "Gị onye nwe ego, gịnị kpatara ị na - eche maka nzọpụta gị nanị, ma ị hụghị ndị iro gị n'anya? Gịnị mere na ị nataghị nkwekọrịta zuru oke nke Onye Mbụ ahụ mere n'etiti gị na Chineke? Ma olee otu i si jụ ndụ Ya ebighi ebi mgbe ị nọ? Nganga gị emewo ka ị họrọ ọnwụ wee nọgide na-enweghị onyinye a na-enye gị. " Ndị nwụrụ anwụ na mmehie ga-ebili ikpe siri ike, ma nweta nkọwa zuru ezu banyere okwu, ọrụ na echiche ha. Ọ bụ ezie na onye ahụ a dọtara n'ebube Kraịst site n'okwukwe na ya ka ịhụnanya si n'ime Kraịst wụnye ya, nke kpaliri ya ijere ọrụ ebere bụ nke gosipụtara ndụ ebighị ebi taa.
30 Apụghị m ime ihe ọ bụla n'onwe m. Dika m'nuru, Mu onwem nēkpe ikpe; n'ihi na achọghị m ihe m chọrọ, kama ọ bụ uche Nna m nke zitere m.
Kraịst na-arụ ọrụ kasịnụ nke mmadụ nile; ọ bụ Onye ikpe ebighi ebi. Kraist maara na ikike a nyere ya, ma o di umeala n'obi, na-agbadata n'adighi ala di ala n'idi umeala n'obi, si, "Onwe m enwegh ike ime ihe obula." Nke ahụ bụ, enweghị m ike ikpe ikpe, eche, ịhụnanya ma ọ bụ iku ume n'onwe m. N'ihi ya, o nyere Nna ya nsọpụrụ niile
N'oge niile, Jizọs nọ n'ebe Nna ya nọ. Enweghi ike imechi ekwentị a n'agbata abuo maka olu Chineke gwara ya banyere mmuo n'ime mmadu. Mmụọ Chineke na-enyocha ụwa ma nyochaa obi gị, na-ekpughe echiche gị na ihe ị na-ezobe n'aka ndị ọzọ. Mmụọ a na Kraịst na-ekpe gị ikpe ziri ezi. Ngọzi na-adịrị gị ma ọ bụrụ na ị kwupụta mmehie gị n'ihu Chineke ma kweta mgbaghara site n'aka ndị a kpọgidere. A ga - ede aha gị n'akwụkwọ nke Ndụ. Mgbe ahụ, onye ezi omume ga-asị, "Bịanụ, ngọzi nke Nna m, ketanụ alaeze ahụ edoziworo unu site na ntọala nke ụwa."
Kraist n'eghagh i gha ugha n'ihi na o ma ihe di n'obi mmadu. Ọ maara àgwà ndị anyị na-eketa site na nna nna anyị hà, ọ dịghịkwa ekpe anyị ikpe ngwa ngwa. Ọ na-echere ndidi maka nchegharị nke onye mmehie. Udi ya di nso ga ekewapu ndi meworo ebere site n'obi ebere Ya site na ndi nejuputa Mo Nso, ma nesi obi ike.
Kraịst gosipụtara ịdị umeala n'obi ya na ịdị umeala n'obi ya. Ọ nọgidere na-arịọ Nna ya ihe nile ọ chọrọ. Ya mere, Kraist mezuru uche Nna ya n'okwu na n'omume ọbụna n'obe. N'oge awa a na-ekpe ikpe, o kpere ekpere, "Ọ bụghị uche m, kama nke gị." N'ihi ya, ọ ga-esi otú a wepụ ikpe Chineke n'ụzọ zuru ezu.
Mmekọrịta a nile nke di n'etiti Nna na Okpara nke onye nkwusa ozioma deputara bu iji mee ka ayi nwe okwukwe n'okwukwe nke Atọ n'Ime Otu. Ikike nke ime ka ndị mmadụ si n'ọnwụ bilie bụ Nna na Ọkpara. Chineke gosiputara ya niile] l Ya niile wee ghara ime ihe obla iji gosi Ya n'okpara. Olu Kraịst ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n'ihi na o nwere mkpịsị ugodi nke ọnwụ na hel. Okwukwe anyị bụ ihe omimi nke ọgụgụ isi; naanị ma ọ bụrụ na a wụsa ịhụnanya Kraịst n'ime anyị site na ịdị umeala n'obi ya, ka anyị ga-aghọta ezi uche na Chineke bụ Otu n'ime mmadụ atọ maka nzọpụta anyị.
Gịnị bụ mmekọrịta dị n'etiti Nna na Ọkpara dị ka Jizọs kọwara anyị?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:58 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)